Izindaba - Kungani ukhetha ukuxubha imishini
Njengoba phansi kwezitolo ezinkulu kanye neziteshi kungamathayili emabula noma obumba, izinhlobo ezinjalo zaphansi zinezidingo eziphakeme kakhulu zenhlanzeko, phela zimele isithombe sendawo yomphakathi. Ngakho-ke, umsebenzi wokuhlanza kufanele wenziwe ngokucophelela. Kancane kancane, ezinye izindlela zendabuko zokuhlanza azisakwazi ukuhlangabezana nezidingo zokuhlanza zalezi zikhathi, futhi ukuvela nokusetshenziswa kwemishini yokuxubha phansi kushintshe ngokuphelele imisebenzi yezandla ekuhlanzeni phansi ezimbonini eziningi.
Ezindlela zendabuko zokuhlanza, kuvame ukuba nezimo lapho ukuhlanzwa kungekho khona, njengamanye amakhona afile noma amanye amabala okunzima ukuwasusa. Uma amabala enqwabelene ngaso sonke isikhathi, inhlabathi izophenduka ibe phuzi futhi ibe mnyama ngemuva kwesikhathi, kuthinte ubuhle. Ngaphezu kwalokho, indawo yalezi zindawo zomphakathi inkulu kakhulu, uma ufuna ukwenza umsebenzi omuhle wokuhlanza inhlabathi, udinga ukuthola inani elikhulu labasebenzi bokuhlanza abazokwenza, okuyimali enkulu ngokwezindleko zomsebenzi.
Ukusetshenziswa komshini wokuxubha phansi kungazixazulula ngokuphelele izinkinga ezibalulwe ngenhla. Ngokuyinhloko ukusebenza komshini. Udinga nje kuphela ukufaka i-detergent, engagcini ngokuqedela ukuhlanza phansi, kepha futhi inezinzuzo zokunciphisa ukuqina komsebenzi wezisebenzi zokuhlanza, ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokuhlanza nokunciphisa izindleko zokusebenza kokuhlanza. Njengamanje, ubuchwepheshe bemishini yokuhlanza nayo iqhubeka ngokuthuthuka, ake silinde sibone.
Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, izindlela zokuhlanza ezihlanzekile nezisheshayo esizinikezwa yimishini enjengeziqu zemoto namabhulashi aphansi kuya ngokuya kuba nzima ukushiya. Ikakhulukazi ngenkathi yokusebenza komshini ohlakaniphile, ukusebenza kahle kanye nokusebenziseka kalula kubaluleke kakhulu.
Njengezitolo ezinkulu, izinxanxathela zezitolo kanye neziteshi zesitimela esivame ukuya nokubuya, kwesinye isikhathi singabona inani lezinto ezahlukahlukene zokuhlanza ezifana nemishini yokuxubha phansi.
I-granite enemibala ekhanyayo netshe lokugqwala konke kungama-granite wesakhiwo se-lamellar. Ngaphezu kokumunwa kwamanzi nge-capillary okuvamile kwe-granite, ngenxa yombala omhlophe okhanyayo, kuzoba khona indawo yamanzi noma ukungcoliswa komhlaba, futhi umkhondo wamanzi akulula ukunyamalala. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yaleli tshe kuphinde kuhambisane nensimbi esebenzayo edwaleni, imvelo emanzi izoholela ekugqolweni. Emkhakheni wokusetshenziswa kwamatshe nobuhlengikazi, sinolwazi oluningi nolunqwabelene, nalokhu okuhlangenwe nakho kwimikhiqizo nobuchwepheshe obuhlobene. Kuyo yonke iminyaka yokwakhiwa komkhiqizo kanye nezinto ezintsha, iSystem System Yethu Yokulungisa isibe ukukhetha okunokwethenjelwa kakhulu embonini ehlobene namatshe eChina nasemhlabeni.